Nzuzo ntụgharị uche Spam aghọwo ihe na-ezute kwa ụbọchị maka ọtụtụ ndị ọrụ internet. Ịkwụsị ụdị ụdị okporo ụzọ a dị mkpa maka onye nwe ụlọ ọ bụla ma ọ bụ onyeọrụ SEO. Ngwá ọrụ Google Analytics nwere ọtụtụ ụzọ isi wepụ spam na-edekọ aha gị site na akụkọ ndị na-akpọ gị GA. Ụgbọ njem Spam bụ echiche ochie nke oji search engine usoro. Ndị mmadụ n'otu n'otu ga-eji usoro a ịgha ụgha na ndị ahịa ha na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ ha dị ngwa. Ọzọkwa, ọ nwere ike ịkpata echiche ụgha ụgha, na-eme ka nnukwu ọnyà na ndị ahịa ha na-enweghị atụ. Ịghọta ntinye akwụkwọ ntinye aka dị oké mkpa maka onye ọ bụla na-eme e-azụmahịa.